Ka fur fayl kasta Unarchiver One | waxaan ka imid mac
Inkastoo maalmahan caadi ma aha in la helo faylal cufan, ugu yaraan inta badan isticmaalayaasha. Markaan u baahanahay inaan furno faylka leh qaab aan ahayn zip (waxay asal ahaan ku habboon tahay macOS), waxaa naloogu qasbay inaan isticmaalno codsiyada dhinac saddexaad.
Dukaanka Mac App-ka waxa aanu ku haynaa codsiyo kala duwan oo noo ogolaanaya in aanu kala furfurno nooc kasta oo fayl ah, qaar aad u da' weyn oo aan la cusboonaysiin muddo dheer iyo kuwo kale oo lacag bixin ah. Xaqiiqda bixinta arjiga lagu burburinayo faylka la isku dhejiyay, uma qalanto inaad haysato codsiyo sida Unarchiver One.
1 Qaabkee ayaan ku dumin karnaa Unarchiver One
2 Waa maxay Unarchiver One wuxuu ina siinayaa
Qaabkee ayaan ku dumin karnaa Unarchiver One
RAR, 7z, ZIP, XZ, BZIP2, GZIP, RAR, WIM, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR iyo Z.
Waa maxay Unarchiver One wuxuu ina siinayaa
Ka fur oo ku cadaadi faylasha xawaare sare
Ka fur dukumeentiyada galka aan rabno.
Waxaan geli karnaa dhammaan faylasha ku jira kaydka anagoon soo saarin.
Waxay noo ogolaataa inaan jiido faylalka la cufan arjiga si aan u helno nuxurkooda.
Waxaan abuuri karnaa faylal ciriiri ah annagoo ku darayna erayga sirta ah
Heerka cadaadiska faylka sare.
Waxay noo ogolaataa inaan ku cadaadinno qaab kasta.
Codsigan waxaa ka dambeeya horumariyaha antivirus arrimuhu Micro oo kaliya waxay ururiyaan xisaabaadka isticmaalka iyo ogaanshaha.
Si loo rakibo codsigan, Mac-gaagu waa inuu noqdaa gMacOS 10.12 ka dib. Codsiga waxaa loo turjumay Isbaanish, markaa luqaddu dhib kuma yeelan doonto marka la isticmaalayo.
Waxaad awoodi kartaa soo deji codsigan gabi ahaanba bilaash iyada oo loo marayo xiriirka soo socda.
Soo saar Hal-RAR & Qalabka UnZipfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Ka fur fayl kasta Unarchiver One